Linux yenhare inoramba ichiita zvirinani, asi uyu ndiwo mujaho wekureba | Linux Vakapindwa muropa
Linux nhare yekushandisa masisitimu uye enzvimbo dzemifananidzo zvinoramba zvichitora zvirinani, asi iri nhangemutange yedaro refu
Mumavhiki mashoma apfuura ndanga ndichiedza kufungidzira ramangwana uko mafoni eLinux uye mapiritsi ari sarudzo chaiyo. Izvozvi ivo havasi, kana kwete kana isu tichida kusatsamira pane mamwe majaira uye kwete kumhanyisa mumatambudziko mazhinji, asi zvese zviri kugadzirisa nenzira idzo kunyange interface ye Linux yefoni izvo zvandinoda zvishoma zvatanga kundiita kuti ndichinje pfungwa dzangu.
Zvatichaita pano kudzokorora kudiki kwekuti sevha yakagona kuzvionera yega uye yakateerera kune vamwe vashandisi venharaunda, kunyanya kubva munharaunda yePINE64. Iyo pineapple (pine) kambani uye vamwe vayo ndivo vari kuisa zvakanyanya kuyedza mukugadzira Linux yemafoni nemapiritsi kuvandudza, uye dzakawanda zveyedzo zviri kuitwa PinePhone uye PineTab, piritsi randakatenga nekukurumidza sezvazvinogona.
1 Linux yemafoni nhasi
1.1 Phosh: kubva pakuipa kusvika pane zvirinani
1.2 Plasma Mobile uye Manjaro
1.3 Lomiri, Ubuntu Kubata uye, zvakare, Manjaro
1.4 Sailfish zvakare inovandudza
2 Linux yemafoni ine ramangwana rakavimbiswa, kana pasina munhu anoregedza iyo yekuwedzera
Linux yemafoni nhasi
Phosh: kubva pakuipa kusvika pane zvirinani
Saka uye madudziro atinoita Mukutanga kwaGunyana, maviri ekutanga mashandiro anokwanisa kuiswa zviri pamutemo paPineTab aive Mobian uye Arch Linux. Ivo vaviri vakaburitsa mufananidzo wavo na Phosh, Purism interface ine zita rinobva kuFoni Shell. Iyo yakavakirwa paGNOME uye ini handina kuifarira. Muchokwadi, ini handisati ndiri fan wake mukuru, asi zvinhu zviri kutarisa kumusoro nenzira iyo ini pachangu ndanga ndisingatarisiri.
Phosh akaita mbiri huru mukuvandudza mumasvondo mashoma apfuura. Chekutanga sarudzo yavanodaidza kuti "Docked", iyo inoratidza windows nenzira yakada kufanana nemabatirwo avanoitwa pakombuta uye chikamu chakagadzirwa nemidziyo yenhare yakabatana nevekunze vatariri. Iyo yekuvandudza kwechipiri inoita kunge yakakosha kwandiri: desktop desktop, senge GIMP kana LibreOffice, ikozvino vanovhura vachizadza iyo skrini, saka tinokwanisa kuwana ese mamenu uye mashandiro sezvatinoita pakombuta, zvakafanana neizvo zvinoenda kune zvakawanda kana tikabatanidza keyboard nembeva.
Ukuwo, kuita kwave nani, chimwe chinhu chinonyanya kuoneka muArch Linux ine mufananidzo i60% yeiyo yeMobian. Kwete, haishande zvakatsetseka seIpad kana piritsi reApple, asi kunatsurudzwa kwave kwakakosha kwazvo mumavhiki mashoma kuti usava nehanya nazvo.
Plasma Mobile uye Manjaro
Mune mawonero angu, imwe yemabheji anokunda mune ramangwana ichave Manjaro nePlasma interface. Muchokwadi, apo Arch Linux neMobian pavakarwa nema windows emaapplication akadai seGIMP kana Libre Hofisi, Manjaro yatove izere nechidzitiro chayo navo ... asi ine dambudziko kune vashandisi vepiritsi: haigone kutenderedzwa yakatwasuka, uye mune yangu yekupedzisira bvunzo kwete muchiSpanish futi. Inoshanda zvakatsetseka, dhizaini yacho inokwezva uye inonongedza nzira, asi parizvino inofanirwa kugadzirisa.
Ehe, Plasma inogona kuiswa pane mamwe masisitimu, asi uchifunga nezve iyo matanho ekutanga matiri, Ini handingakurudziri kune vasiri-nyanzvi vashandisi.
Lomiri, Ubuntu Kubata uye, zvakare, Manjaro
Zvinonyanya kufarirwa nenharaunda yeLinux nhare Lomiri. Hazvifanirwe kushamisika chero munhu, nekuti Lomiri iri Unity8, kana chii chakafanana, inoratidzira nharaunda yanga iri mukusimudzira kwenguva yakareba kupfuura Phosh. Hatigone kutaura zvakafanana nezvePlasma, asi nhasi Plasma haina kufanana nemakore mashoma apfuura, patakasangana nezvikanganiso zvakawanda kupfuura zvaitarisirwa.
Lomiri inofungidzirwa zvakanaka kwazvo. Yayo interface inoratidzika senge yechokwadi nharembozha, uye mitezo ndiyo yakasarudzika iyo yatichawana mukubata nhare mbozha neLinux operating system Dambudziko nderekuti, parizvino, ivo vari kungobheja paUbuntu Kubata uye Manjaro. Ubuntu Bata Iyo inovandudzwa neBUBports, uye zvinoita sekunge ivo vari kutarisa zvakanyanya pane zvakatipoteredza pane iyo yekushandisa system, iyo ichiri yakavakirwa paUbuntu 16.04 Xenial Xerus uye vane avo vazvino vhezheni vachiri vasingatibvumire isu kumhanyisa maapplication kubva kune epamutemo marekodhi ne graphical interface.
Manjaro atoburitsa vhezheni yake naLomiri, asi iri muchikamu chekutanga uye panguva yacho chete yefoni. Pasina kupokana, chero bedzi vasingazvidzivirire zvakanyanya senge iyo UBports vhezheni, Manjaro + Lomiri ichave imwe yemabheji anokunda, asi ichi chinhu chandisina kukwanisa kuongorora nekuti hapana chinoenderana nePineTab .
Sailfish zvakare inovandudza
Sailfish imwe yeLinux mobile operating system iyo inoda kuve chikamu cheichi. Muchokwadi, iye ndiye "dombo dzekare", kubva pane yake yekutanga vhezheni yakavambwa muna 2011 seMeeGo. Parizvino, vashoma vashandisi vari kusarudza Sailfish, asi mu Iyi link tinogona kuona mini-ratidziro yezvinhu zvakati wandei zvinonakidza: kutsetseka kwayo kwakanaka kwazvo, uye kunogona kushandiswa nemaBluetooth speaker, chimwe chinhu icho mamwe masisitimu anoramba achinetseka nacho.
Linux yemafoni ine ramangwana rakavimbiswa, kana pasina munhu anoregedza iyo yekuwedzera
Nezvese izvo nharaunda iri kushanda nezviri uye kufambira mberi kunoonekwa mumavhiki apfuura, ini pachangu ndine tarisiro kupfuura nakare kose. Ona kuti Arch Linux inofamba sei zvakanyanyisa, sarudzo yayo nyowani, iyo desktop desktop dzinozadza skrini rese uye izvo tinogona kuisa flathub softwareIye zvino ndinogona kufungidzira iro ramangwana matinogona kubvunza webhu neFirefox, kunakidzwa nemultimedia zvirimo naKodi, kugadzirisa mifananidzo neGIMP kana kungoita zvakajairika piritsi uye smartphone, uye izvi zvese nemidziyo yakachipa zvakanyanya pane izvo zvatiri kupihwa ne makambani ane mukurumbira akadai seApple, Microsoft kana Samsung. Izvo hazvizove nhasi, kana mangwana, asi mune ramangwana zvinotaridzika zvakanaka, uye izvi ndinotaura nemoyo wese wechokwadi. Ngatitarisirei kuti hapana anosiya uye havatisiye nehuchi uhu pamiromo yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux nhare yekushandisa masisitimu uye enzvimbo dzemifananidzo zvinoramba zvichitora zvirinani, asi iri nhangemutange yedaro refu
Ndatenda zvikuru, ndinotarisira ramangwana zvinyorwa nezve yedu pinetab.
Ndiri kuyedza Manjaro phosh yakaiswa - kunyangwe yakatwasuka skrini yakatenderedzwa (nekuda kwekhibhodi) uye Plasma kubva ku microsd.
Ini ndakarasa Lomiri kubva kuUB ports nekuda kwekushomeka kwezvirongwa.
Kodi inokodzera ini, nehunyengeri hwekuyedza kuimisa mumawindo emawindo - uye kwete yakazara skrini - iyo yandinotarisira kuti haisisina basa nezvamunotaura nezve arch, iyo inosvika muManjaro mumasvondo maviri, ndinotarisira, senguva dzose .
Izvo zvisingaenderane neni neManjaro phosh ndiko kurira kwepiritsi, asi kana kuburikidza neBluetooth, kune rimwe divi muPlasma ndiyo imwe nzira yakatenderedza.
Changu chikuru chandinoshandisa kuverenga e-mabhuku asi zvinosuwisa kuti hazvitsigire widevine kuona chimwe chinhu online ne DRM, uye kuti chromium inogona kuiswa kubva kuzvitoro, asi haitange kunyangwe paine vhezheni yevagadziri vane chinenge chakakura widevine chigamba icho hachisi icho chiri cheveruzhinji kana zvirinani kwete kubva kunzvimbo dzekuchengetedza.
Ndinovimba kuti iwe unogovana kufambira mberi kwaunowana, - panguva yacho chete uri kuzviita muchiSpanish - uye kukuudza zvandiri kuita, ndatenda zvakare uye kusvika nguva inotevera.
Mhoro: zvaunotaura nezve windows zvinobva kuna Phosh, kwete kubva kuArch.Izvowo saizvozvo muMobian izvozvi, sekuvhara zvirongwa, izvo zvava kutsvedza "makadhi" kumusoro. Ini ndinofungidzira kuti ichauya pavanogadziridza Phosh.
Kuuya kweWIndows 10. Iyo inoshanda sisitimu iyo yakachinja zvese